Umshuwalense: Forecast Pack yabasebenza ngokuzimela nabaqeqeshiwe | Ezezimali Zomnotho
UJose recio | | Umshuwalense
Abazisebenzayo bangezinye zezingxenye zendwangu ekhiqizayo abadinga kakhulu inkampani yomshwalense ongabhekana ngayo nomsebenzi wakho ngaphandle kokwesaba okungalindelekile. Izidingo zabo zehluke kakhulu kunalezo zeminye imikhakha yabantu, ngakho-ke badinga ukufakwa okulungiselelwe isimo sabo. Kumshuwalense UDivina Pastora bayayazi, futhi yingakho bethule i- Isibikezelo Iphakethe, eyenzelwe ochwepheshe abazimele.
Inemikhiqizo emithathu: umshuwalense wengozi, umshuwalense wokulaliswa esibhedlela kanye nomshuwalense wezeMpilo. Ngabo, leli qembu limbozwe nganoma iyiphi inkinga engathinta umsebenzi walo, linikeze isisombululo esiphelele ngokwengeziwe.
Intengo nayo ivumelana nezidingo ngasinye ngoba, ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi ukhethe inani lomshwalense wengozi, ukuvumelanisa izindleko nokutholakala komshuwalense kulokho okudingwa yilowo nalowo msebenzi.
1 Ukusabalala okukhulu
2 Ukuguquguquka okukhulu kokuqasha
3 Inombolo yabantu abazisebenzayo eSpain
Ngabe umshuwalense unikelani? Yebo, into yokuqala ukugqamisa ukuthi kungenzeka ukuqoqa inzuzo yesikhashana noma ephelele yokukhubazeka ngenxa yengozi. Okuthiwa noma yimuphi umuntu ozisebenzayo uzazisa kakhulu, ngoba kungukuthula okukhulu kwengqondo ukuqinisekisa ukuthola imali ejwayelekile noma yini eyenzekayo.
Vele akuyona neze into esizoyithola. Ngaleli phakethe ukungenelela kokuhlinzwa kuyambozwa, izinga lokuzalwa ...
Kukuyo le ndawo lapho sithola ukumbozwa okusha: insizakalo ekhethekile ezimweni ze ukuba nezingane ezikhubazekile. Yize ngaphandle kokumbozwa okusha, okunye okuvelele kakhulu kuyaqhubeka nokufakwa kwezinzuzo zamazinyo ezibandakanya umshuwalense Wezempilo Wezobuchwepheshe. Lo mshuwalense unenketho yokuzikhethela udokotela esifuna ukuselapha, kusuka kuhlu olubanzi lochwepheshe abakha elinye lamashadi ezokwelapha abanzi kakhulu futhi nochwepheshe esingawathola.
Futhi njengoba bazi ukuthi kwabazisebenzelayo, isikhathi singaphezu kwemali, uhlu lokulinda ngumqondo abawazi e-Divina Pastora. Lokho nje kukodwa sekuvele kube yinani elikhulu kakhulu, kokubili impilo yomuntu kanye nempilo yokusebenza kochwepheshe.
Ukuguquguquka okukhulu kokuqasha
Imali ayibizi kuphela. Njengoba sishilo, amandla okuzimela asesimweni sokwenza ushintsho oluningana ukuluguqula. Ingabe Ukuzivumelanisa nezimo okuphezulu Lapho kuqashwa iphakethe kwenza kube kuhle kunoma yimuphi umsebenzi. Ngakho-ke uchwepheshe ngamunye angaqasha abakudinga ngempela.
Futhi kungenxa yokuthi uchwepheshe wezokuklama osebenza ekhaya akafani nochwepheshe wezokuthutha ochitha usuku emgwaqweni. Uma i-freelancer ngayinye inomsebenzi ohlukile, onobungozi obuhlukile, kungani kufanele bathathe umshwalense ofanayo?
Impela a Isixazululo esivumelaniswe nesimo ngasinye Kuyisidingo esibalulekile lapho unenkontileka yomshuwalense, futhi le Forecast Pack iyacabanga ngayo.
Inombolo yabantu abazisebenzayo eSpain
Inani labasebenzi abazisebenzayo eSpain uzinzile ngo-2016, ngokuya ngemininingwane enikezwe yi-UPTA. Bakhombisa ukuthi kulesi sikhathi esihlaziyiwe kubhaliswe inani eliphelele lama-661.000, ngenkathi amaconsi ebengaphansi kancane, enengqikithi yama-640.000.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Umshuwalense » Umshuwalense: Forecast Pack yabasebenza ngokuzimela nabaqeqeshiwe
Amanani avelele kakhulu ngo-2017
Ukuphepha Kwesikhwama Esincane: Zinjani?